Tatitry ny fanjakana tamin’ny Depiote :: Nohamafisin’ny Praiminisitra ny fiain- gan’ny fampandrosoana isam-paritra - ewa.mg
Tatitry ny fanjakana tamin’ny Depiote :: Nohamafisin’ny Praiminisitra ny fiain- gan’ny fampandrosoana isam-paritra
News - Tatitry ny fanjakana tamin’ny Depiote :: Nohamafisin’ny Praiminisitra ny fiain- gan’ny fampandrosoana isam-paritra
Hitodika tokoa amin’ny fampandrosoana isam-paritra ny politikam-pampandrosoan’ ny Fanjakana manomboka izao. Nasongadin’ny praiminisitra, Ntsay Christian, nandritra ny tatitry ny asan’ny governemanta tamin’ireo solombavambahoaka, omaly, io.
Herinandro maromaro izao no efa nanaporofoan’ny Filoha Rajoelina Andry an’ izany paikadim-pampandrosoana eny ifotony izany, tamin’ ny alalan’ny fitokanana an’ireo fotodrafitrasa manakaiky vahoaka, toy ny sekoly sy toby fitsaboana manara-penitra, na ihany koa toeram-pamatsian-drano fisotro madio, hatramin’ny toby miaramila sy fanohanana an’ireo mpandraharaha isam-paritra.
Nahazo fankasitrahana tamin’ireo solombavambahoaka ny fitondran’ny praiminisitra ny andinindinin’ireo zava-bita tamin’ity fihaonana omaly ity, talohan’ny nanomezan’ireo minisitra tsirairay ny ambangovangon’ny asa notanterahin’ izy ireo. «Efa tsy mivangongo aty amin’ny fitondrana foibe intsony ny fahefana fa tsinjaraina tsikelikely any amin’ny faritra. Betsaka ireo ezaka hatao mifandraika amin’ izany», hoy i Ntsay Christian.
Voalaza ho samy nomena tetibola manokana mitentina 2 000 tapitrisa ariary avokoa ireo governora ary ampiasaina amin’izay tetikasam-pampandrosoana mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina ao aminy. Nampahafantarin’ny lehiben’ ny governemanta ihany koa ny famoahana ny drafitra nasionalin’ny fitsinjaram-pahefana, izay hirosoana amin’ny fanandratana ny faritra amin’ ny volana jolay izao. «Hitohy hatrany kosa ny fakan-kevitra handinihana ny tetibola isamparitra », araka ny nambarany.
Handeha any amin’ny faritra Anosy sy Androy io filan-kevitra isam-paritra io, raha afaka andro vitsy. Hisy rahateo ny fanarahamaso ny fomba fiasan’ireo tompon’andraikitra isam-paritra, ankoatra ny fanaovana tomban’ ezaka momba ny asan’ireo governora.
Fantatra fa tokony ho efa tonga any amin’ireo kaominina sy ny distrika eto amintsika ny tetibolany avy, amin’izao fotoana izao. 25 tapitrisa ariary ho an’ireo kaominina ary 50 tapitrisa ariary ho an’ireo distrika. Nomarihin’ny Praiminisitra ny mety mbola hitomboan’ ireo sora-bola ireo saingy miankina hatrany amin’ny filàn’ ny mponina.
Naverina nampahafantarina tamin’ireo solombavambahoaka ny tetikasa fananganana indostria isaky ny distrika na « One district one factory ». Dingana voalohany ny fisafidianana an’ireo distrika telopolo satria hiitatra amin’ny distrika enimpolo hafa avy eo, araka ny vinan’ny fanjakana. «Efa vita avokoa ny taratasy rehetra momba an’io tetikasa io », raha ny fanampim-panazavan’ny Praiminisitra.
L’article Tatitry ny fanjakana tamin’ny Depiote :: Nohamafisin’ny Praiminisitra ny fiain- gan’ny fampandrosoana isam-paritra est apparu en premier sur AoRaha.
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 29 août 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 29 août 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Akademiam-pirenen’ny Fitsaboana: “Tsy fanafody ary malalaka amin’ny tambavy CVO ny tsirairay”
Ho fisorohana ny ahiahin’ny rehetra mikasika fampiasana ny Covid Organics, nihaona tamin’ny filoha ny mpikambana aona amin’ny Akademiam-pirenen’ny fitsaboana (Anamem). Nivoitra tamin’izany ny famelana malalaka ny fampiasana ity tambavy ity eto amin’ny Nosy.Nihaona tamin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireo mpikambana ao anatin’ny Académie Nationale de Médecine de Madagascar (Anamem), ny alarobia teo. Niaraka tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny filoha nandray azy ireo. Tanjon’ny fihaonana ny hanala ny ahiahin’ireo ekipa siantifika sy mpikaroka manoloana ity tambavy novokarina entina hamongorana ny valanaretina covid-19 ity.“Tsy fanafody fa fitsaboana nentim-paharazana nohatsaraina ity Covid-Organics ity. Mamela safidy malalaka ny tsirairay amin’ny fisotroana azy sy ny fanajana tsara ny fatra voalaza ao amin’ny tavoahangy, indrindra ho an’ny ankizy izahay”, hoy ny Anamem.Mahatsapa ny soa entin’ny raokandro malagasy ny Anamem. Na izany aza, manentana izy ireo mba hisian’ny rafitra fanaraha-maso ny fahasalaman’ireo olona nisafidy ny hisotro ny tambavy Covid Organics.Nanambara ny Anamem fa manohana ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fikarohana vahaolana hiadiana amin’ny valanaretina covid-19. Manohana ny ezaka ataon’ny mpikaroka siantifika malagasy ihany koa izy ireo.Nanamafy ity fanambaran’ny Anamem ity ny holafitry ny mpitsabo, tarihin’ny dokotera Andrianasolo Eric. Lalàna hafa no mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana sy ity tambavy Covid Organics ity fa tsy toy ny fanafody mahazatra.Tatiana AL’article Akademiam-pirenen’ny Fitsaboana: “Tsy fanafody ary malalaka amin’ny tambavy CVO ny tsirairay” a été récupéré chez Newsmada.
Praiminisitra Ntsay Christian: “Haverina anatin’ny fotoana fohy ny fandriampahalemana”
Na teny Ivato na tany Melaky, voaresaka ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana. Notsiahivin’ny Praiminisitra Ntsay Christian fa efa ao anatin’ny fiovana izao ny firenena, miaraka amin’ny ainga vaovao hijerena ny tombontsoan’ny vahoaka.“Ho hentitra ary hampihatra ny lalàna amin’ireo tompon’andriki-panjakana mihoa-pefy na manararao-pahefana ny governemanta. Tena vahaolana ny fandrindran’ny tompon’andraikitra tsirairay ny asany ka raha samy mandray ny andraikiny am-pahamarinana lavitry ny kolikoly ny rehetra, ho foana ny tsy fandriampahalemana”, hoy izy tany Melaky, afakomaly. Namory ireo tompon’andraikitra sy olom-boafidy, ireo misahana ny fandriampahalemana ary ny fiarahamonim-pirenena eny anivon’ny faritra ny tenany tamin’izany. Nambarany fa zava-poana ihany ny ezaka rehetra na misy aza ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa rehefa tsy misy fandraisana andraikitra sy ny kolikoly.Nanteriny fa tsy maintsy haverina ny fandriampahalemana sy filaminana io ary ao anatin’ny fotoana fohy. Manatanteraka ny zotra momba izany ny governemanta. “Tsapa sy hita anefa fa mbola be ny goragora sy ny tandrevaka ary ny tsy fandraisan’andraikitra manoloana io tanjona io. Hanao ezaka amin’ny fanatevenana sy ny fampitaovana ny mpitandro filaminana ny fanjakana. Tsy ny asan’ireo mpitandro filaminana ihany izany fa ilaina ny fandraisan’andraikitry ny solontenam-panjakana rehetra”, hoy ihany izy.Ilaina ny fifampitokisana Tsy mifanalavitra amin’izany ny nambarany teny amin’ny CCI Ivato, omaly, tamin’ny famoahana ireo mpianatra ho mpitsara eo anivon’ny ENMG. “Fototra ametrahana ny fahamarinana ny fitsarana ary anisan’ny andrasan’ny vahoaka amin’izao fotoana izao… Tsy misy fandriampahalemana raha tsy mipetraka ny fitsarana. Ilaina ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny fitsarana, tsy mitanila hiaro ny marefo”, hoy izy. Nomarihiny fa manan-danja eo anatrehan’izany rehetra izany koa ny fiovan’ny olom-pirenena tsirairay avy, hampaharitra ny fandriampahalemana hapetraka.Synèse R. L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “Haverina anatin’ny fotoana fohy ny fandriampahalemana” a été récupéré chez Newsmada.
Harom-paosy sy fanendahana :: Enin-dahy niharan’ny fitsaram-bahoaka teto an-drenivohitra
Nisesisesy ny fahatrarana mpanendaka sy mpangarompaosy ary mpanao hala-botry teto an-drenivohitra, ny faramparan’ny herinandro teo. Roapolo ny fitambaran’ireo voasambotra. Tra-tehaky ny fokonolona sy naratra niharan’ny fitsarambahoaka ny enina tamin’ireo. Nahasambotra efatra ambin’ny folo kosa ny polisy. Misy amin’ireo voatondro ho olondratsy ireo no efa nalefa any am-ponja vonjimaika. Tamina toerana telo, teto an-drenivohitra, no nisy an’ireo enin-dahy niharan’ny hatezeram-bahoaka. Anisan’izany ilay lehilahy teny Ampasika, izay naratra mafy nodarohan’ny andian’olona rehefa tratra avy nanendaka sy nandratra vehivavy iray. Nisy telo lahy saika nanao hala-botry teny Ambolokandrina ka nifanenjehan’ny fokonolona sy voadaroka ihany koa. Nofatoran’ny olona teo amin’ny andrin-jiro ny lehilahy iray hafa tratra saika nangalatra vatoaratra tamina fiara, teny Ankerana. Mpandroba tantsaha mitondra entana vao maraina sady mpamaky trano sy mpanendaka eny amin’iny faritra 67Ha sy ny manodidina iny ny valo tamin’ireo efatra ambin’ny folo lahy voasambotry ny polisy. Nahatrarana antsy lava telo sy vy roa tany amin’ireo andian-dehilahy ireo. Teny amin’iny faritra Ambohimanarina iny kosa ny dimy lahy tratran’ny polisy mbola noho ny raharaha vaky trano sy hala-botry ary fanendahana hatrany. Polisy nanao fanamiana sivily indray no nahasambotra lehilahy mpangarompaosy teny Analakely. L’article Harom-paosy sy fanendahana :: Enin-dahy niharan’ny fitsaram-bahoaka teto an-drenivohitra est apparu en premier sur AoRaha.
Lozam-piarakodia tany Ambositra : 2 namoy ny ainy, 52 naratra
Miisa 2 no namoy ny ainy nandritry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny distrikan’Ambositra, izay nateraky ny karandalana. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny lalan’Ivato, fokontany Itsengy, 8 kilometra tsy hidirana an’Ambositra. Ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Fiara vaventy iray nitondra olona maro nandeha nianatsimo hihazo an’i Bekily, sy Fort-Dauphin no nifatratra tany anaty hantsana. Ankoatra ireo olona namoy ny ainy, dia saika naratra avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha rehetra tao anatin’ity fiara niharan-doza ity, vokatry ny fahavoazana. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ihany koa ny tsirairay. Raha mbola arahi-maso any amin’ny hopitaly ao an-toerana kosa ireo tena voa mafy. Araka ny nambaran’ny zandarimariam-pirenena, dia olana ny tsy nahatafidiran’ny ”vitesse”, izay isan’ny nahatonga ny loza, teo ihany koa ny fanaovana taingimbe, izay efa teo amin’ny 82 ny mpandeha tao anatiny. Niezaka ny namerina izany ihany ny mpamily, saingy tsy nahafehy ny hafainganam-pandehan’ny fiara nentiny, raha nihemotra tampoka izy. Nampandre ny zandary avy hatrany ireo olona nahita tany an-toerana. Tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana avy eo anivon’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena. Maro ireo olona no voatsindrin’ireo entana mavesatra, ka voatery nosokirina, ka tamin’izany no tsy tana ny ain’ireto mpandeha. Fanakanan-dalana Araka ny fitantaran’ny mpamily, lozam-pifamoivoizana nateraky ny fanakanan-dalana no niseho. Nandeha mafy ny tenany izao nitera-doza izao. Nifanehitra tamin’ny taksiborosy zotra nasionaly teo amin’ny fiholanana nisy fiakarana kosa izy ireo, izay nilaza taminy fa misy fanakanan-dahalo tany amin’ny lalana nandehanana. Tamin’izany indrindra no niezaka niala lalana ilay fiara kamio, nanapa-kevitra hiverin-dalana ny mpamily, ary dia nihemotra aloha ka izao nivarina tany anaty hantsana izao. Ora vitsy ihany dia tonga namantana teo amin’ity fiara niharan’ny lozam-pifamoivoizana ireo dahalo nanararaotra nangalatra ny entan’ireo mpandeha, tamin’ny alalan’ny fandrahonana tamin’ny basy. Natahotra noho ny fandrahonana tamin’izany ny mpamily mpanampy izay saika niezaka nanohitra, ka voatery nanome ny entana. Valérie R. L’article Lozam-piarakodia tany Ambositra : 2 namoy ny ainy, 52 naratra est apparu en premier sur .L’article Lozam-piarakodia tany Ambositra : 2 namoy ny ainy, 52 naratra a été récupéré chez Triatra.
ADY AMIN’NY CORONAVIRUS MADAGASIKARA MIATRIKA NY CORONAVIRUS Mitohy hatrany ny fampitaovana hanatsaràna ny rafipahasalamana iatrehana amin’ny ady amin’ny Covid-19. Ny COI (Commission de l’Océan Indien), izay fivondronan’ny firenena eo amin’ny ranomasimbe Indiana, dia manohana tanteraka ny ezaka ataon’ny Ministeran’ny Fahasalamambahoaka, amin’ny alalan’ny fanolorana fitaovana maro, toy ny « concentrateur d’oxygène », « tenue de protection », « Caméra thermique », izay santionany ihany ireo, ary mbola misy andiany hafa ho avy. Nanamafy arak’izany Andriamatoa Sekretera Jeneraly ny Ministeran’ny fahasalamambahoaka, raha nandray ara-pomba ofisialy ireo fitaovana teny amin’ny seranampiaramanidina Ivato, ny maha sarobidy sy zavadehibe ireo fitaovana ireo, ho fanampiana ireo efa ampelantanana, ahafahantsika mandresy haingana ny valanaretina Covid-19. Lisitr’ireo entana voaray L’article a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.